काठमाडौं । कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनको आगामी चैत १६ गते हुने २५औं केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचनका लागि प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायीहरूको टिमको जित सुनिश्चित भएको छ ।
वाम तथा प्रगतिशील धारको प्रतिनिधित्व गर्दै सो टिमबाट वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठ नेतृत्वको टिम चुनावी मैदानमा आएको छ । बारको १५ सदस्यीय कार्यसमितिका लागि ६४ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । स्वतन्त्र, सक्षम र जवाफदेही न्यायपालिकाका साथै संवैधानिक सर्वोच्चता र मानवअधिकार तथा विधिको शासनको पक्षमा प्रतिबद्ध रहने घोषणा गरेको सो टिम बार चुनावको इतिहासमै सबैभन्दा बलियो टिम भएकाले विजय सुनिश्चीत भएको बताइएको छ । सो समूहमा समावेशी, सन्तुलित एवं युवा एवं अनुभवी टिमलाई संलग्न गराइएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठले नेतृत्व गरेको सो टिमको उपाध्यक्ष प्रदेश १ मा मानबहादुर रुम्दाली, प्रदेश २ मा रामचन्द्र सिंह, प्रदेश ३ मा ईश्वरीप्रसाद भट्टराई, प्रदेश ४ मा सुरेन्द्र थापा मगर, प्रदेश ५ मा लीलाधर मरासिनी, प्रदेश ६ मा मीनबहादुर महत, प्रदेश ७ मा उमेशप्रसाद विष्ट उपाध्यक्षा महिला मा रक्षा बस्यालले उम्मेदवारी दिएका छन् । यसैगरी सो समूहको महासचिवमा सुरेन्द्र थापा तथा कोषाध्यक्षमा रुद्रप्रसाद पोखरेलको उम्मेदवारी परेको छ । यस्तै सो समूहबाट सदस्यहरूमा मोहन साह शंकर, पञ्चनारायण मण्डल, वीरेन्द्रकुमार ठाकुर, बिनाकुमारी सिंह, बद्रीनारायण नगरकोटी, कल्पनाकुमारी भण्डारी, अञ्जु कायस्थ, डा. शिवराज पण्डित, गंगासागर खत्री, भीमसेन बन्जरा, भुवनप्रसाद निरौला, प्रकाश महर्जन, बालकृष्ण गैरे र खिमानन्द अधिकारी उम्मेदवारका रूपमा खडा भएका छन् ।
यता अध्यक्षमा श्रेष्ठसहित नौ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । अध्यक्षका लागि उम्मेदवारी दिनेमा डेमोक्याट्रिक लयर्स एसोसिएसन (डीएलए) बाट सुनीलकुमार पोखरेल तथा अन्य उम्मेवदारहरूमा डा. पुष्पप्रसाद खतिवडा, कृष्णप्रसाद शर्मा, रामप्रसाद प्रजापति, तोयनाथ ढुंगाना, गजेन्द्रबहादुर थापा, लोकध्वज खाँड र विराट न्यौपाने छन् ।
त्यस्तै, महासचिव पदका लागि थापासहित लीलामणि पौडेल, रामहरि त्रिपाठी गरी तीनको उम्मेदवारी परेको छ । बारको कार्यसमितिमा एक कोषाध्यक्ष, सदस्यमा दलित एक, मधेशी र मुस्लिम दुई, आदिवासी जनजाति दुई, महिला दुई र आठजना खुला सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
निर्वाचनको कार्यतालिकाअनुसार सोमबार उम्मेवादवारी दर्ता भएको छ भने फागुन ८ गते अर्थात् आज दाबीविरोध र अन्तिम नामावली प्रकाशन फागुन ११ गते रहेको छ । देशभरका १० हजार ३ सय १३ मतदाताले ३५ मतदान केन्द्रबाट मत हाल्नेछन् । बारको केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकाल तीन वर्षको हुनेछ । नेपाल बार एसोसिएसन निर्वाचन २०७५ का लागि प्रमुख निर्वाचन अधिकृत दामोदर खड्का तोकिएको छ ।